Fitsaram-bahoaka nahafaty zandary : voasambotra ny ben’ny Tanàna sy olona miisa 30 | NewsMada
Fitsaram-bahoaka nahafaty zandary : voasambotra ny ben’ny Tanàna sy olona miisa 30
Raikitra ny hazalambo taorian’ilay fitsaram-bahoaka nahafaty ny zandary GP2C Fanambina Marcellin “Chef de poste avancé” ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Namorona, distrikan’i Mananjary, ny 29 desambra 2016 teo. Vokany, voasambotra ny ben’ny Tanàna ao an-toerana sy olona miisa 30 hafa. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, ahiahina ho isan’ireo nitarika olona nankeny amin’ny birao ny zandary sy tompon’antoka tamin’ny famonoana ny “chef de poste” ity ben’ny Tanànan’i Namorona ity. Lasa nitsoaka any anaty ala avokoa ny ankamaroan’ireo zaza amam-behivavy. Ireo vatan-dehilahy tao an-tanàna sisa tafajanona ka niroso tamin’ny fisamborana avy hatrany ny zandary avy amin’ny Fign notarihin’ny lehiben’ny vondron-tobim-pileovana sy ny kaompania. Mbola raikitra ny fisamborana sy ny fifanenjehana any an-toerana hatramin’ny omaly.
Marihina fa potika tanteraka ny varavarana sy ny tafon’ilay poste avancé nandritra ity fitsaram-bahoaka ity. Novonoin’ireo andian’olona tamin’ny fomba feno habibiana ny GP2C Fanambina. Novelisina tamin’ny hazo sy vy ny lohany ka tsy tana intsony ny ainy. Naratra mafy koa ilay zandary naman’ilay “chef de poste”. Tsy vitan’izay fa mbola nopotehin’ireo olona ireo koa ny entana rehetra tao amin’ny birao. Efa nanao tifi-danitra ihany ireto zandary niharam-boina ireto satria nanantena ho tafavoaka tao anatin’ity fitsaram-bahoaka ity, saingy tsy nampihontsona ireo andian’olona marobe izany ka izao niafara tamin’ny famoizana aina izao.
Efa niala tany Mananjary ary andrasana ao amin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena ao Fianarantsoa, omaly alina ny nofo mangatsiaka ny GP2C Fanambina Marcellin. Halevina anio ao any Ihosy kosa ny razana.